Mariky ny fibolisaran’ny mpitondra frantsay amin’ny mpanao gazety ny fihazonana an’i Gaspard Glanz · Global Voices teny Malagasy
Maro ny ahiahy momba ny fahalalahan'ny gazety ao Frantsa
Mpanoratra Rakotomalala, Suzanne Lehn Nandika (en) i Diana Rhudick, Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 06 Jona 2019 6:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, русский, Français
Pikantsarin'ny Taranis News misy ny lahatsary fisamborana an'i Gaspard Glanz tamin'ny 20 Aprily 2019.
Ny 20 Aprily 2019, nosamborina nandritra ny fakàna horonantsary ny fihetsiketsehana tao amin'ny Place de la République tao Paris i Gaspard Glanz, ilay mpampita horonantsary. Mitantana ny sampam-pahalalambaovao an-tsary, Taranis News, izay mitantara ny hetsika ara-tsosialy any Frantsa izy.
Taorian'ny fisamborana azy, nogadraina noho ny “faniratsirana ny solontenan'ny mpampihatra lalàna” sy “nandray anjara tamin'ny vondrona iray mba hitarika herisetra sy fandravana” i Glanz. Nomena “karatra S” i Glanz, mampiseho fa heverina ho fandrahonana goavana ho an'ny fiarovam-pirenena izy, ary mety hiharan'ny fanarahamaso hatrany. Noraràna tsy hiditra ao Paris mba hitantara ireo fihetsiketsehana Salotra Mavo manaraka ihany koa izy, fepetra izay nolazainy fa tsy ahafahany manao ny asany sy hahazoany fivelomana.
Gaspard Glanz avy amin'i Claude Truong-Ngoc, Wikimedia Commons – CC-BY-SA 4.0
Mbola nohazonina i Glanz mandra-pahatongan'ny 22 Aprily, izay namotsorana azy. Nanamafy ny fikasany hanohitra ny fandraràna azy izy, niaraka tamin'ny mpisolovava azy, saingy nolavin'ny fitsarana heloka bevava ao Paris izany tamin'ny 29 Aprily noho ny tsy fahampian'ny porofo.
Afaka nivoaka teto Paris i Glanz tamin'ny 1 Mey sy ny asabotsy manaraka, rehefa nanao ny hetsi-panoherany ny Salotra Mavo.
Nalaza tany Frantsa i Glanz tamin'ny voalohany noho ny lahatsariny nitatitra ny hetsi-panoherana sy ny hetsika ara-tsosialy toy ny fihetsiketsehana manohitra ny lalànan'ny asa, ny fihetsiketsehana Nuit debout (“mitsangana amin'ny alina”), sy ny fihetsiketsehana Salotra Mavo, ary ny tatitra fepetra iainan'ireo mpitsoa-ponenana ao Calais.
Araka ny voalazan'ny polisy, nosamborina i Glanz noho ny “fandraisana anjara tamin'ny vondrona iray mba hanao herisetra sy fandravana” ary noho ny “faniratsirana manampahefana amin'ny fampiharana lalàna,” noho ny fanondrotondroana polisy amin'ny rantsantanana. Sarotra porofoina araka ny lalàna ny fiampangana teo aloha ary nesorina tamin'ny famotsorana azy.
Namariparitra ny fepetra nitazonana azy tao amin'ny Reporterre, tranokalam-baovao Frantsay izay mifantoka amin'ny olana ara-tontolo iainana i Glanz:
Somary ratsy ny fotoanako tany am-ponja, feno mangana ny vatako. Rehefa nosamborina aho dia natosika tamin'ny tany, tsy mbola nihinana na inona na inona aho nanomboka ny asabotsy. Afaka nisotro rano aho, saingy tsy mora ilay izy, tsy maintsy niady aho, ary nieritreritra aho fa noho ny lazako, dia afaka nisotro rano aho, saingy tsy afaka manao izany ny olon-kafa izay teo amin'ny toerako. Mbola reko ny fofona amany izay tsy maintsy nandrakotra ny tenako, mba hilazako aminao ny zava-misy ao amin'ny tobin'ny polisy.
Nanazava ny zavatra hitany fa tena anton'ny fisamborana azy izy:
Rehefa nisy fanafihana tany Strasbourg ary nalaina horonantsary ny firaisankinan'izy ireo, dia nirehareha fatratra izy ireo nampiseho ny fiarovan-dohany, ny ampingany ary ny basy. Tao izahay mpitati-baovao, nanandratra ny polisy izahay. Saingy rehefa mampiseho ny hadisoan-dry zareo izahay, inona no mitranga eny an-dalambe, inona marina no mitranga ao Paris, dia tsy avela haka horonantsary, satria mety haneho zavatra tsy tian'izy ireo hojerena. Tonga amin'ny fenitry ny tongotra mby an-dakana tsy mety ny dia miverina isika. “
Firaisankina amin'i Glanz
Tonga nanohana an'i Glanz ireo fikambanan'ny gazetim-pirenena sy ny zon'ny media. Maro ireo tsikera nanohitra ny minisitry ny atitany, izay nanamafy fa tsy nanana karatra mpanao gazety i Glanz. Ny karatra dia midika fa miasa ho an'ny mpampiasa ny mitondra karatra, saingy tsy mitaky amin'ny mpanao gazety mba hitondra karatra maha-mpanao gazety ny lalàna Frantsay mba hanaovana ny asany eny an-kalamanjana.
Nanakiana ny “fanafihana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety” ny Reporters Sans Frontières sy ny Sociétés de Journalistes de Libération
#GiletsJaunes: @RSF_inter sy @SNJ_national miampanga ny fanafihana ny “fahalalahana fototry ny gazety.”
Nanasongadina ny tsy fifanarahan-dalàna nataon'ny minisitry ny atitany ireo mpisolovava:
Fitsarana mahaleotena? Ankoatra ny fanafihana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, mampanontany tena momba ny fahaleovantenan'ny sampam-pitsarana ireo fepetra noraisina tamin'ilay mpanao gazety @GaspardGlanz
Te-hampahatsiahy an'i #GaspardGlanz aho fa manana fisaraham-pahefana isika ao amin'ity firenena ity.
Manao fitsarana mialoha, amin'ny maha minisitry ny atitany, fa nisy ny heloka bevava natao, raha tokony ho mpitsara mahaleotena no mitsara izany.
Misy olona afaka mampahatsiahy an'Atoa. Castaner momba ny fisaraham-pahefana ve?
Goavana ny firaisankinan'ireo mpanao gazetin'ny media mahazatra Fantsay. Nanome ny famaritany momba ny atao hoe mpanao gazety ilay mpamoaka lahatsoratra ara-politika ao amin'ny Radio France, manazava fa mifandraika amin'i Gaspard Glanz ny teboka rehetra amin'ny famaritana:
Inona no atao hoe mpanao gazety?
Lahatsoratra avy amin'i @lofejoma #le79Inter pic.twitter.com/c3q025J9g9
Lasibatra hafa amin'ny fanafihana ny fahalalahan'ny media: Ny tranonkala mpanao fanadihadiana, Disclose
Ny 24 aprily, efatra andro taorian'ny nisamborana an'i Gaspard Glanz, mpanangom-baovao anankiroa avy amin'ny tranonkalam-baovao mpanao fanadihadiana, Disclose sy mpanao gazetin'ny Radio-France no nampanantsoina tao amin'ny DGSI, sampam-pitsikilovana ao amin'ny minisiteran'ny atitany, noho ny famoahana antontan-taratasy tsiambaratelo momba ny fiarovana tao anatin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo hoe “Made in France,” izay miompana amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana Frantsay mahafaty nandritra ny ady tao Yemen nataon'i Arabia Saodita sy ny mpiara-dia aminy.
[MAIKA] Mpanao gazety roa avy ao amin'ny https://t.co/aJsaTD26Fz [Disclose] no nampanantsoina atao fanadihadiana momba ny “fanohintohinanana ny tsiambaratelon'ny fiarovam-pirenena” taorian'ny fitarainan'ny Minisiteran'ny Tafika.” #yemenpapers #madeinfrance @Mediapart @InvestigationRF @ARTEInfo @konbininews
Pikantsary tao amin'ny pejy fandraisan'ny Disclose, mampiseho ny fanadihadian'izy ireo “Vita Frantsay” momba ny fampiasana fitaovam-piadiana Frantsay mahery vaika amin'ny ady ankehitriny ao Yemen
Mbola niloa-bava mafy sy mazava ireo mpanao gazety tamin'ny fanamafisana ny firaisankinan'izy ireo. Rue89 Strasbourg nanoratra hoe:
Androany, satria nampiseho izany vaovao izany izy ireo, mpanao gazety telo no iharan'ny fandrahonana fitoriana amin'ny heloka azo saziana an-tranomaizina, raha ny hamantatra ny loharanom-baovaon'izy ireo no tena tanjona miharihary. “
Fikambanan'ny mpanao gazety, sy tonian-dahatsoratra na ny biraon'ny famoahan-dahatsoratra (anisan'izany ireo tonian-dahatsoratry ny @LaCroix) miisa 37 no nampiseho ny fanohanany ireo mpanao gazetin'ny @Disclose_ngo sy @RadioFrance. Ho atao fanadihadiana eo anoloan'ny DGSI izy ireo amin'ny tapaky ny volana Mey taorian'ny fanadihadiana momba ny fampiasana fitaovam-piadiana ao Yemen. “
Mihemotra ny fahalalahan'ny media ao Frantsa
Hatramin'ny fotoana nandraisany ny asany, nanana fifandraisana lavitra tamin'ny gazety ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny kabinetrany, ary mampalahelo sy faran'izay ratsy indrindra. Milaza ny tantaran'ny fitiavana lasa mangatsiaka ity lahatsoratra avy amin'ny gazety mpivoaka isan'andro Le Parisien ity.
Tsy fankahalana na tsy firaharahiana ny gazety, te-hametraka fifandraisana mivantana amin'ny vahoaka Frantsay izy, “hoy ny fanadihadiana nataon'ny mpandray anjara tsy tapaka. Manazava ny antony mahatonga azy ho liana be amin'ny media sosialy izany.
Laharana faha-32 amin'ireo firenena 180 i Frantsa amin'izao fotoana izao ao amin'ny laharana momba ny fahalalahan'ny gazety 2019 avy amin'ny RSF, very toerana iray ary isa 0.34 nanomboka tamin'ny taona 2018.